Talooyin ku saabsan xulashada kaniiniga kaas oo ka soo baxa wixii aad ka filaysay | Ragga Stylish
Markaad go'aansato inaad doorato kiniinka adiga ku xiisaynaya, waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo suuqa ah. Kuwa soo socdaa waxay noqon doonaan samee xulasho sax ah.
Noocyo iyo moodello nooc kasta leh ayaa sameyn doona dalab weyn taasi waxay abuuri doontaa dhammaan noocyada shaki iyo su'aalo ku saabsan kiniinka kaas oo ku siin doona xalka ugu fiican dookhaaga iyo baahiyahaaga.
Xulo kiniin leh nidaam Android, ama a iPad? Windows 10 waxay si habsami leh ugu dhex jirtaa qalabkan. Su'aal kale oo go'aan leh ayaa ah tan miisaaniyad aan u qoondeyn doono si aad u iibsato. Isku mid maahan haddii aan raadineyno kiniin fudud ama mid hawlo badan qabta.
1 Nidaamka hawlgalka ee kiniinka
2 Cabbirka shaashadda
3 Kaydinta aad u baahan tahay
Nidaamka hawlgalka ee kiniinka
Markay tahay falanqaynta nidaamka hawlgalka ee kiniiniga aan heli doonno laga yaabo inuu rakibay, waa in loo tixgeliyaa in tikniyoolajiyaddu si dhakhso leh u socoto. Barnaamijyadii dhammaantood xanaaqsanaa sanadkii la soo dhaafay ayaa hadda gebi ahaanba laga yaabaa inay taariikh yihiin. Dareenkan, waxa ugu badan ee lagula taliyaa waa kiniinka ku soo iibso qalab casri ah, waxa ugu dambeeya ee aan ka helno suuqa.
Waxaa jira fikrado kala geddisan oo ku saabsan haddii ay fiican tahay iyo in kale Android, Windows ama IOS. Khabiirada badankood waxay kugula taliyaan nidaamka Android.
Waxa kale oo jira ikhtiyaarro badan haddii aan ku falanqeyno cabirka shaashadda kaniiniga. Ilaa toddobo inji Waxaan dooneynaa inaan helno tusaalayaal ku shaqeyn doona hawlaheena warbaahinta badan qaab howleed. Haddii aan taas jeclaanno pantalla Badda Aad u weyn, si aad u daawato sawirada, sawirada iyo fiidiyowyada oo baaxad weyn leh, waa inaad tixgelisaa dhibaatooyinka maaraynta iyo wareejinta.
Kaydinta aad u baahan tahay
Kaydinta kiniinku waxay ku xirnaan doontaa waxa aan dooneyno inaan ku keydinno. Si kastaba xaalku ha ahaadee, had iyo jeer waxaa jira ikhtiyaar ah iibso moodel leh boosas si aad u geliso kaarka Micro SD. Waa suurtagal in doorashadan ugu dambeysa ay ka jaban tahay waxa macnaheedu noqon lahaa in la iibsado kiniin leh awood badan oo kaydinta gudaha ah.
Ilaha sawirka: YouTube / WhatsApp ee looxa
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Waa maxay kiniinka ay tahay inaad iibsato sida?
Shan surwaal oo aad u fiican xagaagan